सावधान ! कुकुरले टोक्दा मात्र होइन चाट्नु पनि प्राणघातक हुनसक्छ, यस्ता हुन्छन् रोगको लक्षण | Rajmarga
सावधान ! कुकुरले टोक्दा मात्र होइन चाट्नु पनि प्राणघातक हुनसक्छ, यस्ता हुन्छन् रोगको लक्षण
करिब डेढ वर्ष पहिले डाक्टर जैको नेल काँकर स्पैनियल नश्लको आफ्नो कुकुर हार्वीका साथमा खेलिरहेका थिए, जब उनले आफ्नो हातमा हल्का कोतरेको देखे । उनले कोतरेको ठाउँमा सफा गरे र फेरि आफ्नो दैनिकीमा लागे ।
दुई सातासम्म सबै कुरा ठिकै रह्यो तर त्यसपछि उनलाई फ्लुजस्तो केही भयो। उनले बुझ्न सकेनन् कि आखिर के भइरहेको छ।
वास्तवमा उनलाई कुकुरको रालका कारणबाट सेप्टिसेमिया (एकप्रकारको संक्रमण) भएको थियो, जसबाट उनको रगतमा विष फैलियो र उनको रोगसँग लड्न क्षमता घट्दै गयो । सेप्टिसीमिया संसारभर हुने मृत्युको एउटा ठुलो कारण बन्ने गरेको छ । नेलको मृत्यु त भएन तर उनी मृत्युको ‘निकै नजिक’ थिए ।
जैकोको घटना निकै रेयर हो । तर यो असली पनि हो । संसारभरमा हरेक वर्ष करिब दुई करोड मानिस सेप्टिसीमियाको शिकार हुने गर्दछन् ।
एकएक मिनेट महत्वपूर्ण
नेललाई पहिला त अनुमान नै भएन कि उनी कुनप्रकारको रोगको शिकार भएका छन्, किनभने त्यतिबेला उनलाई मात्र ज्वरो आएको थियो । उनी बस सुत्न गए ।
उनले भने–साँझ मेरी पार्टनर घर आइन् र उनले मलाई गम्भीर अवस्थामा फेला पारिन् । उनले एमरजेन्सी सेवामा फोन गरिन् । धन्य उनले बुझिन् कि भएको के छ र उनले तत्काल मेरो उपचार सुरु गरिन् ।
सेप्टिसीमिया जति छिटो नियन्त्रणमा आयो विरामी त्यति नै चाँडो ठिक हुने आशा बढ्दछ ।यो संक्रमणको स्थितिमा एकएक मिनेट मूल्यवान हुन्छ । जसैजसै समय बित्दै जान्छ खतरा पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ ।
नेलले भने–मलाई घरबाटै एन्टीबायोटिक्स र अन्य जरुरी तरल पदार्थ दिन थालिएको थियो, तैपनि म एमरजेन्सी रुममा पुग्ने बित्तिकै बेहोस भएँ ।
त्यसपछि उनी पाँच दिनसम्म आईसीयूमा रहे किनभने उनी कोमामा गइसकेका थिए । नेलले भने–जब मलाई होस आयो तब मैले देखेँ कि मेरो शरीर लगभग कालो भइसकेको थियो । मेरो रगतको थोपा विचित्र तरिकाले जमेको थियो र मेरो टिश्युमा पनि क्षति पुगेको थियो।
नेलको किड्नी पनि फेल भएको थियो र उनलाई दुई महिनासम्म डायलासिसमा राख्नपर्ने भयो । चार महिनासम्म अस्पतालमा रहेपछि उनको दुवै खुट्टा घुँडाभन्दा मुनि काटियो । उनको नाकको माथिल्लो हिस्सा पनि खत्तम भयो ।
नेलले भने–मेरा लागि यो निकै कठिन समय थियो। मलाई सुरुमा थाहा थियो कि मेरा औंलाहरु र मेरो खुट्टा जानेवाला छ तर मेरो अनुहारका साथ यस्तो हुनेछ भन्ने मलाई अनुमानसमेत थिएन ।
अस्पतालपछि पनि उनले खाना, हिड्न र स्वास लिन निकै कठिनाईको सामना गरे । उनको ओठमा घाउको निशाना पनि बाँकी रह्यो ।
नेलले भने कि यसक्रममा उनी नराम्रोसँग चिडचिडाहट र डिप्रेशनग्रस्त बनेका थिए । यद्यपि तीन महिनापछि उनी पुनः हिँडडुल गर्न लागे । तर जे भयो त्यसमा उनी अहिले पनि विश्वास मानिरहेका छैनन् ।
नेलको कठिनाइ यही अन्त्य भएन ।आफैले पीडा भोगेपछि उनले एउटा अर्को निकै कठिन निर्णय गर्नु थियो । उनले आफ्नो प्यारो कुकुर हार्वीको हत्या गर्नु थियो ताकि अरु कसैमा यसप्रकारको संक्रमण नहोस्।
अहिले नेलको अवस्था निकै सुधारिएको छ । अस्पतालबाट उनले एउटा कृत्रिम नाक प्राप्त गरेका छन् तर अब उनी त्यो लगाउँदैनन् । उनका अनुसार उनका साथ जे भयो त्यसलाई उनी कसैबाट लुकाउन चाहँदैनन् ।
के हो सेप्टिसीमिया ?
–विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो एउटा यस्तो संक्रमण हो, जुन त्यतिबेला हुन्छ जब मानिसको शरीरको प्रतिरक्षातन्त्र (इम्युन सिस्टम) कुनै इन्फेक्शनको जवाफमा केही बढी नै सक्रिय हुन्छ ।
–सेप्टिसीमिया भएपछि सुरुवाती समस्या हल्का लाग्न सक्दछ, जस्तो औलामा कतै हल्का कोतरेजस्तो वा काटेजस्तो । तर यदि सही समयमा यसको कारण पत्ता लागेन भने तब शरीरमा धेरै हानी पुग्दछ। उदाहरणका लागि टिश्युमा क्षति पुग्न सक्दछ, कुनै अंगले काम गर्न बन्द गर्न सक्दछ र मृत्यु पनि हुन सक्दछ।
–सेप्टिसीमिया के हो , यसको वास्तविक कारण अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । यसको खतरनाक असरलाई ध्यान राखेर यसलाई ‘साइलेन्ट किलर’ भन्ने गरिएको छ।
–सेप्टिसीमियाको पहिचान गर्न पनि निकै कठिन हुन्छ । किनभने यसको सुरुवाती लक्षण कुनै आम संक्रमण र ज्वरोजस्तो हुन्छ ।
–सेप्टिसीमिया फन्ड अफ युनाइटेड किंगडमका अनुसार सेप्टिसीमियाका ६ वटा प्रमुख लक्षण हुन्छ–बोल्न समस्या हुनु, मांसपेशहिरुमा पीडा हुनु, चिसो लाग्नु, पिसाव गर्न समस्या हुनु, स्वासप्रस्वासमा समस्या हुनु र छालामा धब्बा वा छाला चिलाउनु । बीबीसी हिन्दी
Previous post: केही खाने बित्तिकै ‘गर्भवती’ हुने अचम्मको रोग
Next post: हात हेरेर भाग्य बताउने र विश्वास गर्नेहरु हो ! कस्ले भन्छ हात नहुनेको भाग्य हुँदैन ?
फेसबुकले किन नाङ्गो फोटो माग्न थाल्यो ? यस्तो रहेछ कारण